PoPinVdo – Page 208 – သတင်းဦး၊သတင်းထူးများ နှင့်​ ဗဟုသုတ
စတုတ္ထတန်း​ကျောင်းသား ငြိမ်း​မောင်​ရဲ့ ရည်းစားစာဖတ်ရင်း ကျောတွေပါ ချမ်းသွားခဲ့တဲ့ ဆရာမ
July 25, 2018 ​ရွှေ မိုး ညိုနိုင်​ငံတကာသတင်းNo Comment on 2030 အထိ ဖြစ်ပျက်မယ့်အရာတွေကို ပြောပြတဲ့ အချိန်ခရီးသွားတစ်ဦး အမေရိကားမှာ ထွက်ပေါ်
အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သူ့ကိုယ်သူ အချိန်ခရီးသွားလို့ ပြောခဲ့ပြီး သူဟာ 2030 ကို ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒီလိုဆိုတိုင်း အမှန်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။လူတိုင်းပြောတတ်တဲ့စကားဖြစ်ပေမယ့် သူ့ကိုတော့ အလိမ်ဖော်တဲ့စက်နဲ့ စစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလို စစ်ဆေးရာမှာ သူဟာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကို မေးခွန်းတွေ လှည့်ပတ်မေးပေမယ့် ချွတ်ချော်သွားခြင်းမရှိ…
Fan အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အချိန် မောင်ချိုနဲ့ဆက်ဆံရေးကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
July 25, 2018 ​ရွှေ မိုး ညိုcelebrityNo Comment on Fan အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အချိန် မောင်ချိုနဲ့ဆက်ဆံရေးကို ဖွင့်ဟလာတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်
မြန်မာအိုင်ဒေါ Season3ဟာ Level မြင့်လာတာနဲ့အမျှ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ ဖန်တွေအချင်းချင်းကြားအငြင်းပွားမှုတွေဟာ တစထက်တစ ပိုမြင့်တက်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးမှာ အဓိကထား တိုက်ခိုက်နေကြတာကတော့ ဖြိုးမြတ်အောင် Fan တွေနဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ Fan…
အီဂျစ်တွင် မကြာမီက တူးဖော်တွေ့ခဲ့သော ခေါင်းတလားအတွင်း မံမီအလောင်းကို စိမ်ထားသည့်အရည်များအား သောက်သုံးလိုသူ တစ်သောင်းခန့်ရှိနေရာ အစိုးရ ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားရ
July 24, 2018 Funny Popinထူးဆန်းထွေလာNo Comment on အီဂျစ်တွင် မကြာမီက တူးဖော်တွေ့ခဲ့သော ခေါင်းတလားအတွင်း မံမီအလောင်းကို စိမ်ထားသည့်အရည်များအား သောက်သုံးလိုသူ တစ်သောင်းခန့်ရှိနေရာ အစိုးရ ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားရ
သင်ဆိုလျှင် ကျိန်စာသင့်ထားသော ခေါင်းတလားကြီးတစ်ခုအတွင်းမှ အလောင်းကောင်ကို စိမ်ထားသည့်အရည်များအား သောက်သုံးရန် စိတ်ဖြင့်ပင် မတွေးမိနိုင်ချေ။ သို့ရာတွင် အီဂျစ်နိုင်ငံတွင်ကား အလောင်းစိမ်ထားသည့် အရည်များကို သောက်လိုသူ ၁၀၀၀၀ ခန့်ရှိနေသည်။ အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း ရှေးဟောင်းခေါင်းတလားကြီးတစ်ခုကို တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါအခေါင်းတွင်းတွင်…
July 24, 2018 Funny Popinထူးဆန်းထွေလာNo Comment on လူတစ်ယောက်ကိုမအိပ်ပဲနေနိုင်စေမယ့် ဓါတ်ငွေ့ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ခြင်း
၁၉၄၀ ပြည့်နှစ်တုန်းက ရုရှားသိပ္ပံပညာရျင်တွေဟာ လူတစ်ယောက်ကို မအိပ်ပဲနေနိုင်စေမယ့် ဓါတ်ငွေ့တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဓါတ်ငွေ့ကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက် သုံ့ပန်း ၅ ယောက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ရက် ၃၀ တိတိ ဒီလူ ၅ ယောက်ကို အလုံပိတ်ခန်းထဲထည့်ပြီးတော့ ဓါတ်ငွေ့လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲမှာတော့ အကျဉ်းသားတွေရဲ့အသံကိုနားထောင်ဖို့ မိုက်ခရိုဖုန်းတွေ နဲ့သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်…
အလည်တစ်ခေါက် လာစေချင်သည် ရေတံခွန်နှင့် မုက္ခာဆင်စခန်းဆီ
July 24, 2018 Funny Popinသိမှတ်စရာNo Comment on အလည်တစ်ခေါက် လာစေချင်သည် ရေတံခွန်နှင့် မုက္ခာဆင်စခန်းဆီ
ပျော်ရွှင်ကြည်နူး သာယာလှပ စည်ကားနေသော မုက္ခာဆင်စခန်းနှင့် ရေတံခွန်ကို အလည်တစ်ခေါက်သွားမည်ဆိုလျှင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သာယာဝတီခရိုင် မင်းလှမြို့နယ် သရက်တပင်တာဆုံ ရန်ကုန်-ပြည် ကားလမ်းမကြီး မိုင်တိုင် ၁ဝ၃ မှ အရှေ့ဘက်သို့ စိန်ကန့်လန့်-မြို့ချောင်း ကားလမ်းအတိုင်းသွားပြီး မိုင်တိုင်အမှတ် ရှစ်မိုင်ခြောက်ဖာလုံသို့ရောက်လျှင်…
July 24, 2018 Funny PopinကြားရသိရသမျှNo Comment on မြန်မာ့ တိုက်စစ်မှူး အောင်သူ စပိန်ကို ပြောင်းရတော့မှာလား ?
အောင်သူဆိုတဲ့ မြန်မာဘောလုံးကြယ်တစ်ပွင့် ဟာ ထိုင်းဘောလုံးကမ္ဘာတွင် အထွန်းတောက်ဆုံးဖြစ်နေတာပရိသတ်ကြီးအသိပင်။လက်ရှိကလပ် ပူးလစ်တယ်ရိုကိုပင် အောင်သူတယ်ရိုလို့ ပရိသတ်တွေက နာမည်ပေးရသည်အထိ အောင်သူခြေစွမ်းပြသလျက်ရှိပါတယ်။ ထိုင်းပရီးမီးယားလိဂ် နာမည်ကြီးတိုက်စစ်မှူးတွေနဲ့ အပြိုင်ဂိုးတွေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်းသွင်းနေတဲ့ သူ့ ကိုထိုင်းပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းကြီးတွေကခေါ်ယူဖိုစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ ထိုင်းပရီးမီးယားလိဂ်အင်အားကြီးကလပ်အသင်း တစ်သင်းဖြစ်တဲ့မြောင်တောင်ယူနိုက်တက်ဟာ…
ခရီးသွားတွေကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားစေတဲ့ တရုတ်ပြည်က မှန်လျှောက်လမ်း
July 24, 2018 Funny Popinဖြစ်ရပ်မှန်No Comment on ခရီးသွားတွေကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားစေတဲ့ တရုတ်ပြည်က မှန်လျှောက်လမ်း
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့တိုင်ဟန် မှာရှိတဲ့ မှန်လျှောက်လမ်း အကြောင်းကတော့ ရောက်ဖူးကြသူတိုင်း ပြောစမှတ်ဖြစ်ကြမှာပါ။ တောင်နံရံကို ပတ်ပြီး ပြုလုပ်ထားတဲ့ အဲဒီ လျှောက်လမ်းဟာ မှန်အကြည်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ထုထည်ကြီးမားတဲ့ မှန်ချပ် ဆိုပေမယ့် အောက်ဖက်ကို ထွင်းဖောက်မြင်နေရတာမို့ လမ်းလျှောက်သူတွေကို…
လျှာအောက်မှာ သကြားနဲ့ ဆားကိုငုံပြီး အိပ်ရင် ဘာဖြစ်သလဲ ?
July 24, 2018 July 24, 2018 Funny Popinကျန်းမာ​ရေးNo Comment on လျှာအောက်မှာ သကြားနဲ့ ဆားကိုငုံပြီး အိပ်ရင် ဘာဖြစ်သလဲ ?
မင်္ဂလာပါနော်။ အခုသလော ညညအိပ်မပျော်ဘူးဖြစ်နေလားရှင့်။အိပ်မပျော်လို့ မနက်စောစောမထနိုင် လုပ်စရာရှိလို့ အတင်းကုန်းရုန်းထရပေမဲ့ တစ်နေကုန်ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေဖြစ်နေလား။ အိပ်မပျော်ပါဘူးဆို Facebook ကြည့်လိုက် ဂိမ်းဆော့လိုက်နဲ့မို့ ပိုပြီး အိပ်မပျော်ဖြစ်နေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုပါပြီ။ အိပ်မပျော်ခြင်း အိပ်မပျော်တာဟာ စိတ်ဖိစီးမှု စိတ်ဓါတ်ကျမှု စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့…
လူပေါင်းရာနှ င့် ချီ ပျောက်ဆုံးနေ တဲ့ လာအို ရေကာတာ ကျိုးပေါက်မှု ဗွီဒီယိုဖိုင်
July 24, 2018 Funny Popinနိုင်​ငံတကာသတင်းNo Comment on လူပေါင်းရာနှ င့် ချီ ပျောက်ဆုံးနေ တဲ့ လာအို ရေကာတာ ကျိုးပေါက်မှု ဗွီဒီယိုဖိုင်
လာအိုတွင် ရေကာ တာ ကျိုးပေါက်မှုကြောင့် လူပေါင်းရာနှင့်ချီ ပျောက်ဆုံးနေ လာအိုနိုင်ငံတွင် ရေကာတာတစ်ခု ကျိုးပေါက်မှုကြောင့် လူပေါင်း ရာနှင့်ချီ ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရှိရသည်။ နိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ အတ္တာပူ ပြည်နယ်ရှိ ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရာ ရေကာတာကြီးတစ်ခု…
July 24, 2018 Funny Popinသိမှတ်စရာNo Comment on ထီပေါက်အောင် ဘယ်လိုထိုးမလဲ? ထီပေါက်ချင်တဲ့သူတွေဖတ်ကြည့်ပြီး ဒီနည်းအတိုင်း ထိုးလိုက်နော်
ထီပေါက်အောင် ဘယ်လိုထိုးမလဲ? ထီပေါက်ချင်တဲ့သူတွေဖတ်ကြည့်ပြီး ဒီနည်းအတိုင်း ထိုးလိုက်နော် ထီပေါက်အောင် ဘယ်လိုထိုးမလဲ? ထီပေါက်ချင်တဲ့သူတွေဖတ်ကြည့်ပြီး ဒီနည်းအတိုင်း ထိုးလိုက်နော် ကျွန်တော့ facebook သူငယ်ချင်းတွေထဲကထီဝါသနာပါတဲ့ သူများရှိခဲ့ရင် ထီထိုးနည်းလေး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီတွက်နည်းအရတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ထီပေါက်တဲ့ကံက( ၇ )နှစ်မှ တစ်ခါပေါ်တာပါ။…
Previous 1 … 207 208 209 … 661 Next